PINN: ihe ọzọ na NOOBS maka Raspberry Pi | Site na Linux
PINN: ihe ọzọ na NOOBS maka Raspberry Pi
Ekwuru m n’oge na-adịbeghị anya banyere NOOBS ebe a na blog, nke bụ ngwa ọrụ ga - enyere anyị aka ịwụnye ọtụtụ sistemụ na pip piit anyị, NOOBS bu ngwa oru n’enye anyi webusaiti Raspberry Pi.
N'ime ya anyị nwere ike ịhụ sistemụ akwado site na NOOBS nke anyi huru Raspbian, Ubuntu mate, Windows 10 na ndi ozo. Ọ bụ ya mere n'oge a anyị ga-eji ekwu okwu banyere PINN, nke bụ ihe ọzọ na NOOBS.
1 Banyere PINN
2 Etu esi etinye PINN na utu Pi?
3 Kedu otu esi edozi nha nchekwa PINN?
PINN (PINN abụghị NOOBS) dị nnọọ ka NOOBS bụ OS installer maka Raspberry Pi nke na-enye anyị ohere ịwụnye sistemụ arụmọrụ dị na kaadị SD gị.
Na oge buut, enwere ike ịhọrọ otu sistemụ arụnyere iji bido.
PINN nwekwara ike rụọ ọrụ dị ka usoro mgbake ịtọgharịa sistemụ nrụọrụ gị na "ọnọdụ nrụnye izizi" ọ bụrụ na ọ daa, ma ọ bụ na ịchọrọ ịmalite ọzọ.
Agbanyeghị na ọdịdị PINN na NOOBS fọrọ nke nta ka ha bụrụ otu ihe e ji mara PINN ọ bụ nke a O nwere ọtụtụ atụmatụ na-eme ka ọ dị elu karịa NOOBS.
N'adịghị ka NOOBS nwere usoro ndepụta nke nwere ike ịwụnye PINN ka mma ebe ọ bụ na ndepụta nke sistemụ arụmọrụ iji wụnye Pipi anyị dị ukwuu.
Etu esi etinye PINN na utu Pi?
Si ị chọrọ ịnwale ọzọ na NOOBS anyị kwesịrị gaa na njikọ ndị a ebe anyị ga-enweta ụdị nke PINN Lite nke ga-adaba na NOOBS Lite.
Agbanyeghi na enwere ụdị PINN nkịtị, naanị ya Raspbian ejiri ya mere ọ ka mma iji ụdị Lite.
Emechara nbudata anyị ga-adọpụ faịlụ ahụ enwetara na anyị ga-idetuo ọdịnaya niile n'ime SD anyị.
Mgbe ahụ, anyị na-aga n'ihu itinye SD n'ime Rasberi Pi anyị ma jikọọ ya na ike ma anyị ga-ahụ na PINN amalite.
Como ị ga-ahụ na interface bụ otu ihe ahụ dị ka NOOBS, iji hụ ndepụta nke usoro dị maka ngwaọrụ anyị anyị ga-jikọọ na netwọk.
Nke a anyị na-eme ya site na akara ngosi WiFi, anyị na-ahọrọ netwọk iji jikọọ.
Site ugbua inwe njikọ ịntanetị Anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ sistemụ arụmọrụ anyị nwere ike itinye na sistemụ anyị.
Kedu otu esi edozi nha nchekwa PINN?
PINN o nwere ọghọm na nke ahụ bụ na nrụnye na-ekenye ohere nke SD nha nha anya, nke ahụ bụ ikwu.
Ọ bụrụ na anyị wụnye sistemụ abụọ ọ ga-ekenye ọkara ohere maka nke ọ bụla, ọ bụrụ na anyị wụnye 3 ohere ahụ ga-ekewa atọ na ọ bụrụ na ọ ga-aga nke ọma.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ọ gaghị anọchite anya nsogbu na mbụ, ọ bụrụ na ị wụnye sistemụ iji nwee ike iji Rasberi maka egwuregwu na onye ọzọ raara onwe ya nye Kodi. O doro anya na n'egwuregwu gị ị ga-achọ ohere karịa, yabụ na ọ baghị uru na ị nyefere ya ohere karịa Kodi chọrọ.
Maka nke a, anyị nwere nhọrọ abụọ. Nke mbụ n'ime ha bu imeghari uzo nkewa site na enyemaka nke Gparted.
Ọ bụ ezie na usoro a nwere ike ibute usoro ihe na-emerụ emerụ, ụzọ a ga-esi mee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị bụ ịkwaga nkewa otu otu. Ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ị na-eme ihe niile n'otu oge, ị ga-ejide n'aka ibibi sistemụ nke Rasberi Pi gị.
Secondzọ nke abụọ bụ site na idezi faịlụ PINN n'ihi na nke a anyị nwere ike iji ngwa kere onye ọrụ ndị njikọ bụ nke a.
N'ebe a, anyị ga-ahọrọ ụdị Raspberry Pi anyị, oke SD anyị ma anyị ga-egosipụta usoro anyị ga-etinye na ya.
Ozugbo ahọpụtara anyị, ọ ga-enye anyị ohere igosipụta ogo ole anyị ga-ekenye nke ọ bụla.
Na njedebe nke a, ọ ga-enye anyị njikọ iji budata faịlụ anyị ga-etinye n'ime PINN ma dịrị njikere na ya, anyị ga-enwe ike ịwụnye sistemu egosipụtara na Raspberry Pi anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » PINN: ihe ọzọ na NOOBS maka Raspberry Pi
Ezi ehihie, naanị obi abụọ m nwere bụ, mgbe ị na-agbanwe oghere nke sd kaadị
wụnye libreelec na batocera ma ọ bụrụ na ị ga-ahapụ gigs zuru ezu iji gbakwunye ụlọ ndị dị na folda òkè.
ime ụlọ folda m nwere nwere 24 GB
Enwere m olileanya azịza n'oge na-adịghị anya ma tufuo obi abụọ a.
Zaghachi luis tornero
Natron: ngwa ntinye ederede dijitalụ yiri After Effects